Masinina fonosana marefo Thermoforming
Masinina fonosana rivotra iainana thermoforming
Masinina Vacuum ho an'ny efitrano lehibe kokoa
Ny entana dia ilaina amin'ny fiarovana ara-tsakafo
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-10-23
Ny fivoarana ara-toekarena haingana dia nahatonga ny fitomboana mihombo amin'ny fanjifana entana amin'ny entam-barotra isan-karazany, indrindra amin'ny vokatra fambolena sy sisiny, sakafo, fanafody ary fitaovana avo lenta. Olana manerantany ny fiarovana ny sakafo. Miaraka amin'ny fanafainganana ny tanàn-dehibe, mpamokatra hena maro ...
Fampidirana ireo karazana Masinina Thermoforming
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-10-15
Utien Pack Co, .Ltd. dia mpanamboatra manokana amin'ny famokarana milina famonosana thermoforming mandeha ho azy, ny masinina thermoforming antsika dia manana ambaratonga lehibe ao Shina. Mandritra izany fotoana izany dia nankasitraka sy nidera mafy anay koa ny mpanjifa vahiny maro. Ity misy fampidirana fohy ny fiara ...
Fiovan'ny fonosana, ny tsiambaratelo ho an'ny tahiry lava kokoa
Mampametra-panontaniana ireo mpanamboatra sakafo maro ny fanontaniana: Ahoana ny fomba hanitarana ny fiainana talantalana? Ireto misy safidy mahazatra: ampio antiseptika sy mpitazona vaovao, fonosana tsy misy fangarony, fonosana rivotra voaova ary teknolojia fitehirizana taratra ny hena. Tsy misy isalasalana, ny packagin mety ...
Araho ny fitsipika fototra 4 amin'ny famonosana mba hahatonga ny sakafo ho malaza kokoa
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-09-23
Safidy sakafo amin'izao fotoana izao, niditra tamin'ny vanim-potoana vaovao fanjifana isika, ny sakafo tsy intsony hamenoana ny vavony fotsiny, fa bebe kokoa ny hahazoana fahafaham-po ara-panahy rehefa mankafy azy io. Noho izany, rehefa misafidy sakafo ho mpanjifa, ireo izay mandinika ny kalitao sy ny tsiro dia ho voafidy mora kokoa ...
AHOANA NO HAMONJENA NY BAKERY
Manoloana ny homogenisation ny vokatra bakery ankehitriny, maro ny mpanamboatra manomboka mampihatra fonosana fonosana ho an'ny fahasarotan'ny mpanjifa. Noho izany, ny làlana maharitra amin'ny fampandrosoana ny orinasa dia ny manavaka ny fonosana sy ny famolavolana ny fonosana mifanaraka amin'ny ...
Toy izany koa ny fonosana banga, maninona no malaza kokoa ity fonosana ity?
Ny fonosana vacuum dia mitentina mihoatra ny antsasaky ny tsenan'ny fonosana sakafo. Nandritra ny fotoana lava be, ny fonosana fantsona dia efa ela no niasan'ny milina famonosana banga kely. Ny asa tanana tsy misy dikany sy mavesatra toy izany dia manasarotra ny fanatanterahana famokarana betsaka. A se ...
Vonona ny hisakafo ve ianao?
-Hey, fotoana hisakafoanana antoandro. Andao isika haka sakafo! -OK. Ho aiza? Inona no hohanina? Hatraiza… -Oh andriamanitro, atsaharo, maninona raha jerena ny app ary manafatra zavatra an-tserasera? -Hevitra tsara! Resaka mahazatra io momba ny bandy roa manafangaro ny sakafo manaraka. Amin'ny fotoanan'ny fiainana haingam-pandeha dia mihamaro ny sakafo vonona ary ...
UTIEN PACK dia manolotra ny endriny vaovao amin'ny fonosana MAP
Famonosana ny habakabaka novaina: fanitarana ny vanim-potoana fitehirizana ny vokatra Amin'izao fotoana izao, ny olona dia mila mitaky ny famahana ny olan'ny fitahirizana sakafo sy ireo olana mifandraika amin'izany. Ary koa, misy karazana fonosana isan-karazany hisafidianan'ny mpividy eny an-tsena. Tsy misy isalasalana fa tokony hifantina ...
Ny tsipika fonosana mandeha ho azy dia nitondra ohatra tsara ho an'ny famokarana matihanina
Tao anatin'izay taona lasa izay, niaraka tamin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny indostrialy, ny fanitarana tsy tapaka ny ambaratonga famokarana, ny fahombiazan'ny famokarana ary ny filàna hafa, ny fampandrosoana haingana ny karazan-tsipika famokarana matihanina sy manan-tsaina, indrindra ny sehatry ny fonosana mazoto miasa. Amin'ny presen ...
Ny tsipika famokarana automatique dia mety ho lasa fironana vaovao amin'ny ho avy
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahan'ny mpanjifa, tsy ny kalitao sy ny fahombiazan'ny vokatra ihany no takiana mba ho hentitra kokoa, fa koa ny maha-marina ny fatra fonosana sy ny hakanton'ny endrika fonosana dia takiana manokana. Noho izany, ny fampandrosoana haingana ny milina famonosana ...